तेजवीर बुढा- अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिकमा कुनै पनि पदक नपाएको नेपालले इ.सं. १९२४ मै स्वर्णपदक प्राप्त गरेको छ, सो पदक प्राप्त गर्ने ब्यक्ति हुन् !
नेपाली खेल इतिहासलाई हेर्दा नेपालले हालसम्म पनि अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिकमा कुनै पनि पदक नपाएको इतिहास देखिन्छ ।
सरकारी खेल अभिलेख अनुसार पनि नेपाल ओलम्पिक कमिटी गठन भएको दुई वर्षपछि सन् १९६४ को टोकियो ओलम्पिकबाट नेपालको ओलम्पिक यात्रा शुरु भएको हो। त्यसपछिका ओलम्पिकमा नेपालको मेडल सङ्ख्या हालसम्म शून्य छ।
तर इतिहासको पानालाई राम्रोसंग खोल्दै जाने हो भने इ.सं. १९२४ मा भएको पहिलो हिउदे ओलम्पिकमा नै नेपालले गोल्डमेडल जितेको छ । त्यो पदक जित्ने नेपालीको नामको ‘तेजवीर बुढा‘ ।
विख्यात फोटो संग्रहकर्ता सुनिल उलकले ‘तेजवीर बुढा‘ बारे एउटा महत्वपूर्ण पोस्ट आफ्नो फेसबुकमा शेयर गरेका छन् जुन यसप्रकार रहेको छ ;-
‘तेजवीर बुढा’ शायद धेरैलाइ यो नाम याद पनि छैन होला । कतिले यो नाम सुनेको पनि छैन होला । यो नाम वास्तवमा नेपालको इतिहासमा सदैव याद गर्नु पर्ने नाम हो ।
तेजवीर बुढाको फोटो शायद पहिलो पटक खुला रूपमा प्रदर्शन गर्ने म नै होला । कुनैवेला कान्तिपुरले The faceless Hero भनेर चिनाएको थियो भने नागरिक न्यूजले अन्य फोटो राखेर यी मध्ये तेजवीर को हुन् भन्ने खुलेको छैन भनेर समाचार बनाएर रिचर्ड रविन्सनले खिचेको फोटो राखेको थियो । जब कि त्यस फोटोमा तेजवीर बुढा थिएनन् ।
2/6 गोर्खा रेजिमेन्टमा लान्स नायक पदमा कार्यरत तेजवीर बुढा पनि सगरमाथा आरोहण टोलीमा सहभागी भएका थिए । सगरमाथाको उत्तरी मोहडाबाट आरोहण अभियान थालिएकोले तिब्बती भरियाको पनि ठूलै संख्या थियो ।
तर तिब्बती भरियालाई पहिलो र दोश्रो क्याम्प सम्म मात्र जाने अनुमति थियो भने अन्यमा गोर्खा रेजिमेन्टलाई जिम्मा दिइएको थियो ।
तेजवीर बुढाले १९२४ को ओलम्पिकमा प्राप्त गरेको गोल्ड मेडल
त्यसैले तेजवीर बुढाले जेफ्रि बुस र क्या. फिन्च संग पाचौ क्याम्प सम्म साथ जान पाएका थिए । जेठ १४ को बिहान २६००० फिटको उचाइमा तेजवीर लडे । अगाडी बढ्न सकेनन् जेफ्रि बुस र क्या. फिन्च २७३०० फिट सम्म अगाडी बढे ।त्यसपछि उनिहरूले पनि हार माने । चुचुरा पुग्न कोही सकेनन् ।
इ.सं. १९२२ अर्थात बि.सं. १९७९ को दोश्रो सगरमाथा आरोहण टाेलीका सम्पूर्ण सदस्यहरू
यसरी असफल नै भए पनि सगरमाथा आरोहणको अद्भुत साहस देखाएकोले ओलिम्पिक कमिटिले इ.सं. १९२४ मा भएको पहिलो हिउदे ओलम्पिकमा सगरमाथा आरोहणमा सहभागी सबैलाई संयुक्त रूपमा गोल्ड मेडल प्रदान गरेको थियो । जसमा नेपालका तेजवीर बुढाको नाम नेपाल भनेरै लेखिएको छ ।
-सुनिल उलकको फेसबुकबाट